सर्वश्रेष्ठ 24 बाघ टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरु र महिलाहरुको लागि 24 बाघ टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo अगस्ट 8, 2016
तपाईं सधैं देख्ने व्यक्तिहरू जुन तिनीहरूले देखेका विशाल महत्वको कारण बाघ ट्याटु डिजाइन प्रयोग गर्छन्। एशियामा भएकाहरूले पूर्णतया बुझ्ने कुरा भनेको यसको शरीरमा बाघको डिजाइनको अर्थ हो।
बाघ टैटू अर्थ
टाइगर टैटू विशेष गरी एशियनहरूका बीच सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो। #Tiger को अर्थ यो बकाया बनाउँछ। बाघको टैटू भनेको के हो जुन मानिस कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना बाँच्न सकिन्छ। तिनीहरू कामुक, व्यभिचार, शक्ति र शक्ति को प्रतिनिधित्व गर्दछन। तिनीहरू सौर कुलदेवहरू भन्न सकिन्छ किनकि यसको मानिन्छ कि तिनीहरू स्वदेशी शक्तिहरूद्वारा शासन गरिन्छ।
जो लोग बाघ # टटू को लागि जान्छन् जुन जुनून द्वारा शासन नहीं गरिन्छ किनकी उनि प्रविधि मा विश्वास गर्छन। प्रेमीहरूले यो टैटू स्याउ कसरी देखाउन सक्छन् भनेर देखाउँछन्। बाघलाई मृत्यु भएकाहरूको संरक्षक मानिन्छ। यो प्रायः कब्रहरू वा कब्रहरूमा देखिएका कारण हो।
टाइगर टैटू संसारका विभिन्न भागहरूमा देख्न सकिन्छ र उनीहरूले धेरै चीजहरू पनि प्रस्तुत गर्छन्। यी टैटटोहरूको भिन्नता भनेको के हो उनलाई असाधारण। तिनीहरू ब्रुट बल, पावर, डोमिनन्स, रिलिटी र नोभलिटी, खतरा र विनाश, ऊर्जा, संरक्षण र अभिभावक, जुनून र लैंगिक पवार्डको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो कारण धेरै मानिसहरू यसको प्रयोग गर्दै छन्। बाघको टैटूसँग जोडिएको सुन्दरता भनेको यो पुरुष र महिलाको मनपर्छ।
हामी प्रायः एशियाका मानिसहरूसँग टाइगर टटुट जोड्दछौं। यो किनभने बाघ एशियाई बीच लोकप्रिय छ। एशियन टाइगर यस दिनको माथिका प्राणीको रुपमा चिनिन्छ जुन यो दिन टटू जस्तो देखिन्छ।
हात बाघ टैटू
टटू शरीरको विभिन्न भागहरूमा पूर्णरूपमा फिट हुन्छ। भित्री पछाडि केही चित्रहरू पनि आउँदा पूर्ण पछाडि पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
सेक्सी टाइगर टैटू
टाइगर वा विन्ड वा विन्डरको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन बाघको साथ आकाश जस्तै, बादल वा समुद्रमा सम्बद्ध हुन सक्छ। जब तपाईं पश्चिममा हुनुहुन्छ, केही मानिसहरूले यसको बारेमा खतरनाक प्राणीको रूपमा सोच्न सक्छन्।
रंगीन बाघ टैटू
तथापि, टाइगरहरू राम्रो भाग्य, धन, शक्ति, दया, स्वतन्त्रता र शक्तिको प्रतीक हुन जान्छन्।
शक्तिशाली टाइगर टैटू
आज, तपाईं टैटू को उपयोग गर्न र सार्वजनिक मा खडा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै विशेष कारणहरू छन् कि मानिसहरू यो विशेष टैटूको लागि जान्छन्। तपाईंले यो प्यारा टैटू मसी गर्न सक्नु अघि एशियाई वा चीनबाट आवश्यक हुनुपर्दछ।
लवली बाघ टैटू
तपाईलाई चाहिन्छ कि एक राम्रो कलाकार हो जसले तपाईंको शरीरको कुनै पनि भागमा केहि उत्तम टाइगरहरू आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
टाउको बाघ टैटू
आधुनिक दिन टैटू कलाकारहरूले बाघको टटुट अर्को स्तरमा लिइरहेछन्। यो तपाइँलाई चाहानु भएको # डिसेन्टको प्रकारमा फरक छैन, तिनीहरू तपाईंलाई अविश्वसनीय टटूको विरोध गर्न सक्दछन् जुन तपाईले विरोध गर्न सक्नुहुन्न।
क्यान्सर टाइगर टैटू
टाइगरहरू प्यारा प्राणी हुन् जुन हामीले उनीहरूको हृदयलाई बिर्सन्छौं। हामीसँग हाम्रो शरीरमा यी टाइगरहरू पर्चा देख्ने मौका नहुन सक्छ तर हामीसँग उनीहरूको मा हस्ताक्षर भएको सुअवसर छ।
प्यारा बाघ टैटू
बाघ टैटू एक लोकप्रिय टाइगर टैटू भएको छ जुन कसैले प्रयोग गर्न सक्दछ। प्रत्येक टाइगर यसको महत्व छ जसको कारण हामीले बाघको टैटूको प्रकारको सावधान रहनु पर्छ जुन हामी प्रयोग गर्न जाँदैछौँ।
महिला बाघ टैटू
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि टाइगर टैटू डिजाइन आवश्यक भएको छ। तपाईंले आफ्नो छनौट छनौट गर्नुभन्दा पहिले टाईगर्सहरूको अनलाईन कलिङ्गमा खोज्नु पर्छ। पहिलो पल्ट तपाईंले गर्नु पर्छ एक टैटूवादी हो जसले तपाईंलाई बताउनेछ कि क्याभ मा छ।
पुरुष टाइगर टैटू
जांघ बाघ टैटू
जनजातीय बाघ टैटू डिजाइन एक शक्तिशाली प्रतीक हो जुन सबै एशिया मा सम्मानित छ र समानुपातिकता, जुनून, फोकस, शक्ति, क्रोध र क्रूरता संग जोडिएको मानिन्छ। छवि स्रोत
कोरियामा मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि बाघहरू आँखाबाट हेर्छन् र उनीहरूले भारतमा बाघलाई सर्वोच्च भगवान, शिव वा विनाशकारी चित्रण गरिरहेका छन् जसले बाघको छालाको प्रयोगलाई यसको लुगा वा सवारीमा राखेको देखिन्छ। छवि स्रोत
यसले सारा संसारमा सर्वोच्चता देखाउँदछ। तथापि, त्यहाँ बाघहरू मृत्यु, दुष्ट र जीवनसँग सम्बन्धित छन्। छवि स्रोत
तपाईं डिजाइन र शरीर को प्रयोग को भाग मा कभी नहीं रोक सकते। तपाईं आफ्नो शरीर को कुनै पनि भाग मा आफ्नो चुनाव को कुनै पनि रंग संग स्याही गर्न सक्छन्। महिलाहरु को लागि यो आफ्नो कामुकता को बारे मा कुरा गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। छवि स्रोत
सम्भवतः शरीरको कुनै भाग जहाँ बाघ राम्रो देखिन्छन। शरीरमा यस डिजाइनमा हेर्नुहोस्। यो सुन्दर जस्तो देखिन्छ किनकी धेरै महिलाहरू वा पुरुषहरू यसको प्रयोग गर्न सक्छन् किनकी कारण हो। छवि स्रोत
शरीरको कुनै भाग छैन जहाँ टाइगर टटू डिजाइन यति राम्रो देखिन्छ। यो बायाँ, खुट्टा, पछाडि वा कुनै पनि भागमा यो उत्तम छ जुन तपाईले यो डिजाइन मनपराउनुहुन्छ। छवि स्रोत
यो टोटोटो यति धेरै सुन्दर छन्, किनकि तपाईं आफ्नो शरीरको कुनै पनि भागमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किन कारण हो। यो यसको कारण तपाईं जान सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
रंग तपाईले चाहानु भएको अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि कुरा हो कि तपाईं वरपर बनाउन वा तपाईंको टैटू डिजाइनमा सक्षम हुन सक्नुहुन्न। छवि स्रोत
तपाईँ यो डिजाइन मनपर्छ? यो पहिलो पटक हेर्दा तपाईंलाई के भन्नुहुन्छ? छवि स्रोत
तपाईंले प्रयोग गर्न रोज्नु भएको शरीरको जुन भाग; यो सधैँ प्रशंसा गर्नेछु। छवि स्रोत
छाती टैटूहरूबहिनी टैटूहरूसिंह टटटोहरूबिल्ली ट्याटोप्यारा टैटूहरूक्राउन टैटूहरूहात टाटाटोसचन्द्र टोटोटोएंकर टैटूहरूक्रस टैटूटैटू विचारहरूआदिवासी टैटूहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूप्यार टैटूसूर्य टैटूहरूहेनना टैटूहीरे टैटूहात ट्याटोसआस्तीन टैटूहरूट्याटुहरू केटीहरूको लागिफिर्ता ट्याटोहरूपुरुषहरूको लागि टैटूmehndi डिजाइनज्यामितीय ट्याटुहरूहृदय टटटोईगल ट्याटोचेरी खिलौना टैटूपक्षी टैटूहरूहात्ती टटूआँखा टटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूफूल टैटूहरूबिस्कुट टटूअनन्तता टटूयुगल टैटूहरूतितली टैटूहरूओटोपस ट्याटूkoi fish tattooFeather Tattooगुलाब टैटूहरूकम्पास टैटूपैट टैटूगर्दन टैटूहरूसंगीत टैटूहरूरिप टैटूwatercolor टटूदूत टैटूटखने टैटूतीर टटूकमल फूल टटू